Angovo azo havaozina sy tsy azo havaozina: toetra sy karazany | Green Renewable
Portillo Alemanina | 23/09/2021 19:23 | Angovo azo havaozina
Milaza izahay fa azo havaozina ny loharanom-angovo, raha avy amin'ny loharano voajanahary izany ary tsy ho lany mandritra ny fotoana. Ankoatr'izay dia madio izy io, tsy mandoto sy manana loharanom-pahalalana isan-karazany. Misy karazana loharanon-karena angovo azo havaozina eto amin'ny planetantsika. Miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknolojia ny olona dia nahita fomba bebe kokoa hampiasana ny herin'ny planetantsika nefa tsy mila mifamadika amin'ny lasantsy fôsily ary manohy miatrika ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro. Misy karazany samy hafa ny angovo azo havaozina sy tsy azo havaozina ary ny tsirairay amin'izy ireo dia samy manana ny mampiavaka azy.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao hoe iza amin'ireo hery lehibe azo havaozina sy tsy azo havaozina eto amin'izao tontolo izao.
1 Angovo azo havaozina sy tsy azo havaozina
1.4 Angovo geothermal
1.5 Angovo an-dranomasina
1.6 Angovo hydraulic
1.7 Angovo avy amin'ny masoandro
2 Angovo azo havaozina sy tsy azo havaozina: solika fosily
Ireo dia solika azo avy amin'ny tsiranoka na gazy vita amin'ny zavamaniry na biby biolojika. Izy io dia karazana angovo azo havaozina izay tsy ho lany ary afaka mamaly ny filan'ny fitaterana. Amin'ny fampiasana ireo solika maitso ireo dia afaka mampihena ny fiankinan-doha amin'ny menaka isika ary mampihena ny fahasimbana ateraky ny tontolo iainana. Anisan'ireo biofuel manan-danja indrindra, nahita biodiesel sy bioethanol izahay.
Karazana angovo azo havaozina hafa dia ny angovo biomassa. Izy io dia singa biolojika izay ampiasaina hiteraka angovo. Manangona vondron-javatra biolojika misy heterogeneity sy toetra mampiavaka azy isan-karazany. Biomassa azo raisina ho toy ny zavatra biolojika novokarina tamin'ny fizotry ny biolojika azo ampiasaina ho angovo.
Ohatra, hitantsika ny ampahany biolojika amin'ny fambolena sy fambolena ala, ala maloto, fotaka maloto ary fako matevina an-tanàn-dehibe. Misy fomba maro hampiasana angovo biomassa.
Amin'ny ankapobeny, ity karazana angovo ity dia mifototra amin'ny fanangonana ny angovo kinetika ananan'ny haben'ny rivotra sy ny famokarana herinaratra avy aminy. Hatramin'ny andro taloha, Loharanon'angovo ampiasain'ny olombelona izy io hamatsiana herinaratra ny sambo, hanoto ny voam-bary, na hantsaka rano.
Ankehitriny, ny turbin-drivotra dia ampiasaina hiteraka herinaratra avy amin'ny rivotra. Miankina amin'ny fahaizanao mitsoka dia afaka mahazo mihoatra ny kely ianao. Misy karazany roa ny angovo avy amin'ny rivotra, ny ranomasina ary ny terestrialy.
Izy io dia angovo voatahiry eto ambanin'ny tany amin'ny endrika hafanana. Feno angovo ny planetantsika ary azontsika atao ny mampiasa an'io angovo io hamokarana herinaratra. Famokarana 24 ora tsy tapaka izy io, tsy mety ritra, tsy mety ritra, tsy misy loto mihitsy.
Andiam-teknolojia afaka mampiasa angovo ranomasina izy io. Miankina amin'ny toetr'andro amin'ny fotoana rehetra, tsy azo sakanana ny herin'ny ranomasina, nefa koa mampiasa hery tsara.
Ny onja, ny onja, ny onjan-dranomasina ary ny fahasamihafana amin'ny mari-pana eo anelanelan'ny ambonin'ny fanambanin'ny ranomasina dia azo ampiasaina ho loharano angovo. Ho fanampin'izay, ny tombony ho azy dia ny tsy famokarana vokatra ara-tontolo iainana na hita maso izay tsy maintsy raisintsika.
Ny angovo hydraulic dia angovo ampiasain'ny angovo kinetika ao amin'ny tenan'ny rano. Noho ny riandrano vokatry ny tsy fitoviana, ny herin'ny rano dia afaka manosika ireo turbine mamokatra herinaratra. Tsara ny manamarika fa ity karazana angovo azo havaozina ity dia ny loharanon-karena lehibe amin'ny famokarana herinaratra lehibe mandrapahatongan'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX.
Ny asany dia avy amin'ny zavamaniry hydroelectric, ekena ho loharanon'angovo azo antoka indrindra amin'ny tontolo iainana.
Mampiasa panneaux solaires izy hanovana mivantana ny taratra tariby amin'ny masoandro ho lasa angovo herinaratra. Noho ny sela photovoltaic, ny taratra avy amin'ny masoandro izay milatsaka amin'izy ireo dia afaka manaitaitra ny elektrôna ary miteraka fahasamihafana mety hitranga. Arakaraky ny haben'ny masoandro no mampifandray anao, ny lehibe kokoa ny mety fahasamihafana.
Misy koa karazana angovo masoandro hafa ankoatry ny fotovoltaika toy ny angovo azo avy amin'ny masoandro sy ny angovo thermoelectric amin'ny masoandro. Ny angovo hafanana avy amin'ny masoandro dia karazana angovo avy amin'ny masoandro ary tompon'andraikitra amin'ny fanomezana izay ilain'ny mafana amin'ny sehatry ny fananganana, indostrialy ary fambolena. izany io dia fomba tena mahomby amin'ny fampiasana angovo azo avy amin'ny masoandro.
Etsy ankilany, ny angovo azo avy amin'ny masoandro thermoelectric dia mampiasa lantira na fitaratra izay afaka mifantoka amin'ny taratra masoandro amin'ny faritra kely kokoa. Izany no ahafahan'izy ireo mahatratra ny maripana ambony kokoa ary noho izany dia mamadika ny hafanana ho herinaratra amin'ny alàlan'ny tsiranoka.
Angovo azo havaozina sy tsy azo havaozina: solika fosily
Amin'izao fotoana izao, karazana solika fôsily isan-karazany no ampiasaina amin'ny angovo. Samy manana ny mampiavaka azy sy ny niandohany ny tsirairay. Na izany aza, samy manana angovo betsaka amin'ny tanjona samy hafa izy rehetra.
Ireto no tena lehibe:
Karbaona mineraly. Arintany ampiasaina amin'ny lokomotiva izy io. Karbona indrindra no hita ao anaty tahiry ambanin'ny tany lehibe. Mba hamoahana azy dia atsangana ny toeram-pitrandrahana alaina ny loharano.
menaka. Izy io dia fifangaroan'ny hydrocarbons maromaro amin'ny dingana ranoka. Io dia misy loto maloto hafa ary ampiasaina hahazoana solika isan-karazany sy by-vokatra.
Entona voajanahary. Ny entona methane no tena anaovana azy. Ity entona ity dia mifanitsy amin'ny ampahany maivana amin'ny hydrocarbons. Noho izany, misy ny olona milaza fa ny gazy voajanahary dia tsy misy fandotoana sy fahadiovana avo lenta. Izy io dia alaina amin'ny zaridaina misy solika voajanahary.
Fasika amam-pandriana sy volo-diloilo. Izy ireo dia fitaovana noforonin'ny fasika be vongana tanimanga izay misy sisa tavela amin'ny akora organika. Ity zavatra biolojika ity dia misy akora simba miaraka amina firafitra mitovy amin'ny an'ny menaka.
La angovo nokleary io koa dia raisina ho karazana solika fôsily. Navoaka izy io vokatry ny fihetsika nokleary antsoina hoe fission nokleary. Izy io dia ny fizarazaran'ireo atôma mavesatra toa ny uranium na plutonium.
Heverina ho tsy azo havaozina izy ireo satria ny solika dia hita ao anaty loharanom-pahalalana. Midika izany fa ny zavatra noforonina dia voajanahary ary rakotry ny antsanga. Lalina kokoa sy lalina kokoa, eo ambanin'ny fiasan'ny tsindry ny tany, dia ovàna ho lasa hydrocarbons izy io.
Mila an-tapitrisany taona ity fomba ity. Noho izany, na dia novokarina tsy tapaka aza ny solika, dia novokarina tamin'ny taha kely dia kely amin'ny ambaratonga olombelona. Inona koa, haingana be ny tahan'ny fanjifana solika ka voarindra ny daty hampiasana azy. Ao amin'ny valin'ny famolavolana solika, bakteria aerobika no mihetsika voalohany ary misy bakteria anaerobika miseho avy eo, lalindalina kokoa. Ireo fanehoan-kevitra ireo dia mamoaka oksizena, azota, ary solifara. Ireto singa telo ireto dia ampahany amin'ny fitambaran'ny hydrocarbon mora miova.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny angovo azo havaozina sy tsy azo havaozina ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo azo havaozina sy tsy azo havaozina